#BIM - Mazava ho azy ny fomba fiasa BIM - Geofumadas
May, 2019 AulaGEO fampianarana
Amin'ity dingana fivoarana ity dia asehoko anao ny dingana isan-karazany amin'ny fomba fampiharana ny fomba BIM amin'ny tetikasa sy fikambanana. Ao anatin'izany ny maoderina fanazarana izay hiasanao tetikasa tena izy amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa Autodesk hamoronana modely tena mahasoa, manatanteraka simulator 4D, mamorona soso-kevitra momba ny fananganana foto-kevitra, hamoahana kajy vita amin'ny metica ho an'ny vidiny ary mampiasa Revit miaraka amin'ny angona ivelan'ny tahirin-kevitra ivelan'ny fitantanana of amenities.
Ity fampianarana ity dia mitovy amin'ny Masters of BIM Project Management, izay ny vidiny dia manodidina ny USD3000 ka USD5000, fa, raha tokony hamatsy vola toy izany ianao dia afaka mahazo fahalalana mitovy amin'ny ampahany ampahany amin'ny vidiny. Miaraka amin'ireo fianako Revit sy Robot hafa dia hanana fijery feno momba ny BIM ianao. Aza adino fa tsy programa ny BIM, fomba fiasa mifototra amin'ny teknolojia vaovao. Tsy misy olona milaza aminao fa noho izany dia mety hieritreritra ianao fa ny mahalala BIM dia mila mahalala modely amin'ny Revit ihany ianao. Saingy diso izany, ary izany no antony mahatonga ny maro tsy mahazo ny vokatra andrasana na dia mampiasa vola an'arivony amin'ny fampiofanana sy rindrambaiko aza.
Miaraka amin'ity taranja ity dia hianatra mampiasa BIM ianao mandritra ny tsingerin'ny androm-piainan'ilay tetikasa, raha toa ianao ka afaka manao fanazaran-tena azo ampiharina sy fitarihana amin'ny programa.
Hanatanteraka ny fomba fiasa BIM amin'ny tetikasa sy fikambanana
Mampiasà programa BIM hitantanana ireo tetik'asa fananganana
Mamorona modely azo tanterahina izay maneho ny toe-javatra mampiorina
Mamokatra simulasi ao amin'ny 4D amin'ny dingan'ny fananganana
Mamorona tolo-kevitry ny hevitra momba ny dingana voalohan'ny tetikasa
Mamorona kaonty metaly amin'ny tolo-kevitry ny hevitra
Mamorona fampitandremana metaly antsipirihany amin'ny modely BIM
Mampiasà Revit ho an'ny fitantanana fotodrafitrasa sy fanaraha-maso ny fisorohana
Mampifandray an'i Revit miaraka amin'ny angona ivelany
Ny fahalalana fototry ny Revit
Solosaina misy an'i Revit sy Naviswork
Iza ary ity?
Mpanoratra sy mpahay modely BIM
Mpiandraikitra ny tetikasa
Ho avy tsy ho ela amin'ny teny anglisy amin'ny alàlan'i AulaGEO
Amin'izao fotoana izao, tsy misy amin'ny teny Espaniôla ihany.
Previous Post«Previous Konferansa habakabaka China 2019 - Natao tamim-pahombiazana nandritra ny andro-habakabaka an'i China
Next Post Bentley Systems dia manambara fa efa misy OpenSite Designer izaomanaraka »